Faransiiska Oo Ciidankiisa Kala baxaya wadanka Maali. ( Sanadkii Insixaabaadka). – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Faransiiska Oo Ciidankiisa Kala baxaya wadanka Maali. ( Sanadkii Insixaabaadka).
On Jul 10, 2021 292 0
Dowladda Faransiiska oo hogaamineysa duulaanka gardarada ah ee lagu qaaday wadanka Maali ayaa ku dhawaaqda in ciidankeeda ay kala baxeyso wadankaasi.
Emmanual Macron, madaxweynaha Faransiiska ee caadeystay aflgaadeynta Rasuulka Salla-llaahu caleyhi wasallam ayaa shir jaraa’id oo uu qabtay wuxuu ku sheegay in dowladiisu ay albaabada u laabi doonto saldhigyadeeda milliteri ee ay ku leedahay wuqooyiga dalka Maali.
Isagoo hadlayay kadib wadahadallo uu la yeeshey madaxda galbeedka Africa ayuu Macron sheegay in bilowga sanadka cusub ee 2022-da ay dowladiisu xiri doonto saldhigyada Kidaal, Tasalit iyo Tambaktu ee wuqooyiga wadanka Maali.
Macron ayaa intaa ku daray in dowladiisa ay isku diyaarineyso iney aad u yareyso ciidamada ka jooga wadanka Maali, oo uu sheegay in sanadka cusub lagu soo reebi doono oo keliya 2500 illaa 3000 oo askari, halka ay hadda ciidamada Faransiiska ee jooga Maali dhanyihiin 5100 askari.
Emmanual Macron, madaxweynaha wadanka Faransiiska wuxuu sheegay in isbedelkan cusub uu la falgeli doono xaaladda ka taagan wuqooyiga Maali iyo in lala qabsado wadciga cusub ee jamaacaadka Jihaadiga ah, isagoona intaa ku daray in dowladaha gobolka ay la gudboontahay iney qaataan masuuliyadda amniga wadamadooda.
8 sano kadib oo uu Faransiisku duulaan gardaro ah ku joogo wadanka Maali, waxaa muuqaneysa inuu ka daalay sii wadida duulaankaas, iyadoo aaney jirin wax guul ah oo uu kasoo hooyay dagaalka uu la galay Mujaahidiinta, waana arinta keentay in hadda uu Faransiisku isku diyaariyo inuu ka cararo wadanka Maali.
Ciidamo aad u badan oo Faransiis ah ayaa lagu dilay Maali 8-dii sano ee lasoo dhaafay, inkastoo Faransiisku ay qirteen 50 askari oo keliya, waxaana dalka Maali ka howlgala jamaacada jihaadiga ah ee Nusratul Islaam wal Muslimiin oo hoostagta faraca AlQaacida ee Maqribul Islaam.